BY YeYint Nge ... 7/30/20210comment
ဒုတိယ ဂဠုန်ဦးစောနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
သမီးကြီးကို၃၀.၁၀.၈၉မှာမွေးပြီး(၁၆)ရက်အကြာ၁၆.၁၁.၈၉မှာ မအူပင်ခရိုင်ဓနုဖြူမြိုနယ်ကနေ ပုသိမ်ခရိုင်ရေကြည်မြို့နယ်ကို မ.ဝ.တ အတွင်းရေးမှုးအဖြစ်ပြောင်းရွှေ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါတယ်၊
၂၀၁၅ခှုနှစ်ဇူလိုင်လ(၁၃)ရက်နေ့(တနင်းလာ)နေ့ထုတ်Oriental News Vol1 No25မှာ
ပုသိမ်ကဒေါက်တာစစ်တင်(G.P)ဆိုသူက"ကျွန်တော်နှင့်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်-၅"ဆိုတဲ့ဆောင်းပါးမှာ"ဂဠုန်ဦးစောနှင့်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်"ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြင့် သူဟာဗိုလ်မှုးတင်ဖေအေးဆိုသူနှင့်မထင်မှတ်ပဲတွေ့ဆုံရင်းနှီးခွင့်ရစဉ်ဓနုဖြူဖြစ်စဉ်နှင့်ပါတ်သက်ပြီးမေးမြန်းကြည့်တဲ့အခါ ... ဒုတိယဂဠုန်ဦးစောတစ်ယောက်ကြောင့်ဗိုလ်ချုပ်သမီးရဲ့အသက်ကိုမထိခိုက်စေလိုတဲ့စေတနာကြောင့်တားမြစ်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း...၊အဲဒီလိုတားမြစ်ခဲ့မှု့ကြောင့်သူလည်းတပ်မတော်ကနေနှုတ်ထွက်လိုက်ရပြီးသေနတ်နဲ့ပစ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ဗိုလ်ကြီးမြင့်ဦးကတော့ရာထူးပင်တိုးသွားကြောင်းဆောင်းပါးမှာလုပ်ကြံဖန်တည်းရေးသားခဲ့လို့... ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အဲဒီဂျာနယ်တိုက်ကိုသွားပြီးအဖြစ်မှန်ဆောင်းပါးအပြင်၅မီးနစ်အင်တာဗျူးပါလုပ်ပြီးတုန့်ပြန်ရေးသားခဲ့ရာမှာOriental Newsဂျာနယ်ကSpecial Featureကဏ္ဏအနေနဲ့ကိုဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
Oriental News Journal, Vol,1, No.25 & 26 မှ ကူးယူပါသည်။
ကျွန်တော်နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် - ၅
Author: ဒေါက်တာ စစ်တင် (G .P)
၁၉၈၉ခုနှစ်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ခေါင်းဆောင်တဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် စည်းရုံးရေး ခရီးစဉ်များဟာ အခက်အခဲများနဲ့ ရင်ဆိုင်ရဆုံးကာလဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၈၈ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလမှာ ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံကြီးကို တပ်မတော်က ရက်ရက်စက်စက် ဖြိုခွင်းပြီးနောက် ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှု တည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ဆိုပြီး စစ်အစိုးရ ပေါ်လာခဲ့တယ်။
၁၉၈၉ ခုနှစ်မှာ ပါတီတွေတည်ထောင်ခွင့် ပေး တော့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး(အငြိမ်းစား) ဦးတင်ဦး နဲ့ ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည်တို့ဦးဆောင်တဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပေါ်လာခဲ့တယ်။
မြန်မာပြည်သူများဟာ ဒီပါတီကို အလွန်စိတ်ဝင်စားကြပြီး ပါတီဝင်လျှောက်ကြတာ အံ့သြစရာပါ။ အချိန်တိုအတွင်းမှာ ပါတီဝင်ဦးရေအများ ကြီးရခဲ့တယ်။ ဒီအချိန်ဟာ အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်မှု တွေလုပ်ခဲ့တဲ့ စစ်အစိုးရကလည်း ပြည်သူတွေကို ပြား ပြားဝပ်အောင် ဖိနှိပ်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။ ပြည်သူတွေ ကိုဖိနှိပ်မှုမှာ၊ နိုင်ငံရေး သမားတွေကို နှိပ်စက်ရာမှာ၊ ပါတီ တွေကို တားမြစ်ချုပ်ချယ်ရာမှာ ဧရာဝတီတိုင်းကအဆိုး ဆုံးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
နိုင်ငံရေးပါတီခေါင်းဆောင်တွေကလည်း ပါတီ ဝင်တွေနဲ့တွေ့ရအောင်နယ်လှည့်ပြီးလူထုကြားကွင်း ဆင်းရတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ချမှတ်ထား တဲ့ ... ဥပဒေအတိုင်း ပြောဆိုစည်းရုံးကြရတယ်။ အဲဒီတော့ စစ်တပ်နဲ့ပါတီခေါင်းဆောင်တွေ ထိပ်တိုက်တွေ့ပါတော့ တယ်။ ဒေါ်အောင်းဆန်းစုကြည်ရဲ့ ဧရာဝတီတိုင်း ဓနုဖြူမြို့ စည်းရုံးရေး ခရီးစဉ်မှာ ဒေသခံစစ်တပ်နဲ့ ထိပ်တိုက်ရင် ဆိုင်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်ကို ပြန်ပြောပြချင်တယ်။
ဓနုဖြူ မြို့ကိုရောက်တော့ ဒေါ်စုနဲ့ကျွန်တော်တို့ အဖွဲ့ချုပ်ဝင်တွေ လျှောက်မဲ့လမ်းမှာ ဗိုလ်ကြီးတစ်ဦး ခေါင်းဆောင်တဲ့ စစ်သားဆယ်ဦးခန့်က ပိတ်ဆို့တားဆီးထားတယ်။ ဗိုလ်ကြီးကရှေ့ဆက်လျှောက်လာပါက... သေနတ်နဲ့ပစ်မယ်လို့ အသံချဲ့စက်နဲ့အော်နေပါတယ်။ သူကပစ္စတိုသေနတ်နဲ့ ဒေါ်စုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကို အသင့်ချိန်ထားသလို ဘေးကရဲဘော်တွေကလည်း လက်နက်တွေနဲ့ဒူးထောက်ပြီးအသင့်ချိန်ထားတယ်။ ကျွန်တော်တို့ လူငယ်တွေ မဆုံးဖြတ်ရဲဖြစ်နေချိန်မှာ ဒေါ်စုကရှေ့ဆုံးက (ပုံပါအတိုင်း) ဆက်လျှောက်ခဲ့တယ်။
အဲ့ဒီအချိန်မှာ ၎င်းဗိုလ်ကြီးထက်ရာထူးကြီးတဲ့ ဗိုလ်မှူးတစ်ဦးရောက်လာပြီး ပစ္စတိုသေနတ်ကိုဖယ် လိုက်မှအေးချမ်းသွားခဲ့ပါတယ်။ သို့သော်လည်း ဗိုလ်ကြီးကစိတ်ဆိုးပြီးလူအများရှေ့မှာ သူ့ပခုံးပေါ်ကအပွင့် တွေကို ဆွဲချွတ်ကာလွှင့်ပစ်လိုက်ပုံကို မျက်စိထဲစွဲထင် ကျန်ရစ်ခဲ့တယ်။ ဆယ်နှစ်လောက်ကြာပြီးတဲ့အခါ ...ဒီအဖြစ်အပျက်မှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ဗိုလ်မှူးနဲ့ ရင်းရင်းနှီးနှီး ပြန်ဆုံဖြစ်တယ်။ သူပြောပြချက်အရ သေနတ်နဲ့ပစ်မယ့် ဗိုလ်ကြီးက ရာထူးတိုးသွားပြီး တားမြစ်ခဲ့တဲ့ ဗိုလ်မှူးဖြစ်တဲ့သူက စစ်တပ်ကအနားယူခဲ့ရတယ်။ ကျွန်တော်က ဗိုလ်မှူးအငြိမ်းစားကို အဲဒီအချိန်တုန်းက ဒေါ်စုကို ပစ္စတိုသေနတ်နဲ့ ချိန်ထားတဲ့ ဗိုလ်ကြီးကို ဘယ်လိုပြော ပြီး အမိန့်ပေးခဲ့သလဲလို့မေးမိပါတယ်။ အငြိမ်းစား ဗိုလ်မှူး ပြန်ဖြေတဲ့စကားကိုကြားရတော့ သူ့ကိုလေးစား စွာဦးညွှတ်ဂုဏ်ပြုလိုက်မိပါတယ်။ အငြိမ်းစား ဗိုလ်မှူး ပြန် ဖြေခဲ့တာက . . . . .
ဒုတိယဂဠုန်ဦးစော မဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ . . . ပြောပြီး သေနတ်ဖယ်ဖို့ အမိန့်ပေးခဲ့တာပါတဲ့။
ဒေါက်တာ စစ်တင် (G .P)
၂ဝ၁၅ ခု၊ ဇူလိုင်လ ၁၃ ရက်၊ တနင်္လာနေ့ထုတ် Oriental News ဂျာနယ်၊ စာမျက်နှာအချပ်ပို D ပါ၊ ဆောင်းပါးရှင် ဒေါက်တာစစ်တင် (G .P­) ၏ ကျွန်တော် နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်-၅၊ ဒုတိယဂဠုန်ဦးစောနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်-ခေါင်းစဉ်ပါ ဆောင်းပါးနှင့် ပတ်သက်၍ အခင်းဖြစ်စဉ်၌ အဓိက ပါဝင်ခဲ့သူ ဗိုလ်ကြီးမြင့် ဦး(ငြိမ်း) က လူကိုယ်တိုင်ဂျာနယ်တိုက်သို့ လာရောက် ၍ဖြစ်ရပ်မှန်ကို နှုတ်အားဖြင့်ရှင်းလင်းပြောပြသလို၊ အဆင်သင့်ရေးသားထားသည့် ဖြေရှင်းချက်ဆောင်းပါးတိုတစ်ပုဒ်ကိုလည်း အယ်ဒီတာအဖွဲ့လက်ဝယ်သို့ပေးပို့ လာခဲ့ပါသည်။
ယခုအပတ် Special Feature ကဏ္ဍတွင် ဓနုဖြူ မြို့ဖြစ်စဉ်၌ အဓိကပါဝင်ခဲ့သူ ဗိုလ်ကြီးမြင့်ဦး(ငြိမ်း)၏ တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းချက် ဆောင်းပါးနှင့်အတူကာယကံရှင် အားတွေ့ဆုံမေးမြန်းထားသည့် ငါးမိနစ်အင်တာဗျူးကို ပါ ပူးတွဲဖော်ပြပေးလိုက်ပါသည်။
Oriental News အယ်ဒီတာအဖွဲ့အနေဖြင့် ကမ္ဘာသိ၊ မြန်မာသိ ဖြစ်ရပ်တစ်ခုအပေါ် ဘက်နှစ်ဘက် ၏အသံကို စာဖတ်ပရိသတ်ထံမှောက် ချစ်ခြင်း၊ မုန်းခြင်း ကင်းစွာဖြင့် တင်ပြလိုက်ခြင်းသာ ဖြစ်ပါကြောင်း။
ကျွန်တော် ဒုတိယဂဠုန်ဦးစော မဖြစ်ချင်ခဲ့ပါ . . . . . . .
၁၃၊ ၇၊ ၂ဝ၁၅ ရက်နေ့ထုတ် Oriental News အရှေ့တိုင်းဂျာနယ် NO . 25 ဒေါက်တာစစ်တင် G.P ရဲ့ ဒုတိယဂဠုန်ဦးစောနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးကြောင့်ဒီစာကိုရေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ ဒုတိယမြောက် ရေးခြင်းပါ။ ပထမအကြိမ်စာရေးဆရာ အောင်မြင်သူ (ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီး၊ ဟိုတယ်/ခရီးညွှန်မှူး-ငြိမ်း)က ၂ဝ၁၂ ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာ Hot News ဂျာနယ်ကနေ ရင်ခုန်ခဲ့ကြသူများဆိုတဲ့ဆောင်းပါးနဲ့ ကျွန်တော့်ကိုပထမအကြိမ် ဂဠုန်ဦးစောနဲ့နှိုင်းပြီး ရေးလို့ ကျွန်တော်ပြန်လည်ရေးသားခဲ့ပြီးပါပြီ။ ဒေါက်တာစစ်တင်ဖတ်ဖြစ်မလားတော့ မသိပါ။
ဒေါက်တာစစ်တင်ရေးတဲ့အကြောင်းအရာက ကိုအောင်မြင်သူ ရေးသလိုပါပဲ။ ဗိုလ်မှူးတင်ဖေအေးက ဒီမိုကရေစီ ချစ်မြတ်နိုးတဲ့စစ်သား၊ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်က တကယ့်သတ္တိခဲ သူရဲကောင်း အာဇာနည်၊ ကျွန်တော်က ဒီမိုကရေစီမလိုလားသူ စစ်သားလူရမ်းကား။ ဂဠုန်ဦးစောကဲ့သို့ လူယုတ်မာတံဆိပ်ကပ်ပေး တာကတော့ ကိုအောင်မြင်သူနဲ့ ဒေါက်တာတို့ ပူးပေါင်း ပြီး ဒီဆောင်းပါးကိုရေးခဲ့သလားလို့တောင် ထင်မိပါ တယ်။
ကျွန်တော့်မှာလည်း သာမန်လူသားတစ်ယောက် ရဲ့ မိသားစုဘဝ Family Life ဆိုတာရှိတယ်။ မျိုးဆက် Generation ဆိုတာရှိတယ်။ မိသားစု ဂုဏ်သိက္ခာဆိုတဲ့ ဝန်းကျင်အသိုင်းအဝိုင်းရှိတယ်။ တိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးက လူ့အရိုင်းအစိုင်းအဖြစ် ဝိုင်းပယ်ထားတဲ့သစ္စာဖောက် လူယုတ်မာ ဂဠုန်ဦးစောနဲ့ပဲ ကျွန်တော့်ကို ဘာလို့ခဏ ခဏနှိုင်းနေကြတာလဲ။
အဖြစ်မှန်ကို မသိတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် အသိုင်းအဝိုင်း၊ ကျွန်တော့်မျိုးဆက်နဲ့ပတ်သက်လာမယ့် ပတ်ဝန်းကျင်အသိုင်းအဝိုင်းတွေက ကျွန်တော့်ကို ဘယ်လို လူစားလို့သတ်မှတ်ကြမလဲ။ ဆရာ့အနေနဲ့ ကျွန်တော့်နေရာကနေဝင်ပြီး ကိုယ်ချင်းစာကြည့် စေချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ဟာ ဘယ်လို တိုင်းပြည် ခေါင်းဆောင်ကိုမှလည်း လုပ်ကြံတာမဟုတ်ဘူး။ အဲဒီ အချိန်ကပေးအပ်တဲ့အမိန့်နဲ့ တာဝန်ဝတ္တရားအရ တားမြစ်ခဲ့ခြင်းသာဖြစ်တယ်။
အဲဒီပြဿနာမဖြစ်ခင်ကတည်းက အမျိုးသားဒီမိုက ရေစီအဖွဲ့ချုပ် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည်စည်းရုံးရေး ခရီးစဉ်အတွက် ဒေသဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့ NLD မြို့နယ် တာဝန်ရှိ သူတွေနဲ့သွားလာမယ့် ခရီးလမ်းပန်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စ၊ သွားလာမယ့်လမ်းကြောင်း၊သွားလာမယ့် ယာဉ်၊ စုဝေးဟောပြောမယ့်နေရာကအစအသေးစိတ် ကြိုတင်ညှိနှိုင်းသဘောတူညီမှုရှိခဲ့ပြီးသားပါ။
အဲလိုကြိုတင်ညှိနှိုင်းသဘောတူညီမှုများကြောင့် လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အဖွဲ့ ဓနုဖြူမြို့သို့ စတင်ဝင်ရောက်လာသည်မှ ၎င်းတို့မြို့နယ် NLD ရုံးတွင် စုဝေးဟောပြောပွဲလုပ်ခဲ့ရာမှာ၊ဓနုဖြူမြို့မြောက်ဘက် ဧရာဝတီမြစ်ကမ်းရိုးတစ်လျှောက်ရှိ ကမ်းငူကြီး ဇကာ ကြီးစတဲ့ မြို့ရွာတွေကိုသွားတဲ့ စည်းရုံးရေးခရီးစဉ်မှာ... ဘာပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာမှ မရှိခဲ့ပါဘူး။ ရေလမ်းခရီးအတွက် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး၊ မြို့နယ်ရဲစခန်း၊ မြို့နယ် NLD ရုံးတို့နဲ့နီးတဲ့ ရန်ငြိမ်းအောင် (ကြား သင်္ဘောဆိပ်) ဆိပ်ကမ်းကထွက်ခွာပြီး ပြန်လာရင်လည်း .....ရန်ငြိမ်းအောင်ဆိပ်ကမ်းမှာပဲ ဆိုက်ကပ်ဝင် ရောက်ရန် ကြိုတင်ညှိနှိုင်းသဘောတူထားကြပါတယ်။
အဲဒီကြိုတင် ညှိနှိုင်းသဘောတူညီချက်တွေကို မြို့နယ် NLD က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ရန်ကုန်မှ အတူပါလာတဲ့သူ အားလုံးကို တင်ပြပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် အားလုံးက သိကြပါတယ်။ ဇကာကြီးက အပြန်မှာ မူလသဘောတူညီ ထားတဲ့ ရန်ငြိမ်းအောင်ဆိပ်ကမ်းကပြန်မတက်ဘဲ လမ်းကြောင်းမဟုတ်တဲ့၊ လူစုလူဝေးဖြစ်နိုင်တဲ့ ဓနုဖြူ မြို့မစျေးဓမ္မာရုံထိပ်က ပိတောက်ပင်ဆိပ်ကမ်းကိုရွေးပြီးတက်ခဲ့လို့ ဒီလိုထိပ်တိုက်တိုးမှု ပြဿနာကြုံရတာ ပါ။
ကြိုတင်သဘောတူညီချက်အတိုင်းသာ ရန်ငြိမ်းအောင်ဆိပ်ကမ်းကတက်မယ်ဆိုရင် သူတို့ NLD မြို့နယ်ရုံးနဲ့ လည်း အနီးဆုံးဖြစ်ရုံမက ကျွန်တော် လုံခြုံရေးတာဝန်ကျရာနေရာနဲ့လည်း တောင်မြောက်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ် လို့ ဘယ်လို့မှ ထိပ်တိုက်ပြောစရာ မရှိပါဘူး။ အခုလိုဖြစ်ရတာက ကြိုတင်ညှိနှိုင်းသဘော တူချက်မှာမပါတဲ့၊ လူစည်းကားပြီး လူစုလူဝေးဖြစ်အောင် ဖန်တီးနိုင်တဲ့ ဓနုဖြူမြို့မစျေးအတွင်းမှ ဖြတ်သန်းဝင် ရောက်လာတဲ့အတွက် သတ်မှတ်လမ်းကြောင်း အတိုင်း သွားဖို့နဲ့ လူစုလူဝေးကို အမြန်ဆုံးခွဲဖို့ အသိပေး တားမြစ်ရန် တာဝန်ရှိသည့်အတိုင်းဆောင်ရွက်ရာက တစ်ဆင့် ဒီပြဿနာဖြစ်ခဲ့တာပါ။
အမိန့်နဲ့တာဝန်ဝတ္တရားကို အသက်ထက်တန်ဖိုးထားတဲ့ စစ်သားတစ်ယောက်အနေနဲ့ လုပ်သင့် လုပ်ထိုက်တဲ့အလုပ်ကို လုပ်ခဲ့တာလို့ပဲ ကျွန်တော်ခံယူ ထားပါတယ်။
လူစုလူဝေးဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော်ဟာ တပ်မတော်က သင်ကြားပေးတဲ့နည်းစနစ်အတိုင်း စနစ်တကျ လူစုခွဲဖို့ အသံချဲ့စက်နဲ့ကြေညာပြီး ဆောင်ရွက်ခဲ့တာပါ။ တကယ်ဆို သတ်မှတ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း မလိုက်နာဘဲ ဥပဒေချိုးဖောက်ပြီး လူစုလူဝေးဖြစ်အောင် ဖန်တီးရင် ပစ်ခတ်ဖြိုခွင်းဖို့အထိပစ်မိန့်ရထားပြီးသားပါ။
အဲဒီလိုအချိန်မှာ ဒေါက်တာတို့ပြောတဲ့ ဒုတိယ ဂဠုန် ဦးစောလို မဖြစ်စေလိုတဲ့ ဗိုလ်မှူးတင်ဖေအေးရယ်၊ ဗိုလ်မှူးမောင်ထွန်းဆိုသူရယ် နှစ်ဦးတို့က ကျွန်တော့်ကို တားမြစ်ခဲ့တာမှန်ပါတယ်။ ဒေါက်တာစစ်တင်တို့ ကိုအောင်မြင်သူတို့ပြောသလိုမျိုး ဂဠုန်ဦးစောလို ဖြစ်သွားမယ်ဆိုတဲ့စကားမျိုးဗိုလ်မှူးတင်ဖေအေးမပြောခဲ့ ဘူး။
သူပြောခဲ့တဲ့စကားကဒါ စစ်တိုက်နေတာ မဟုတ်ဘူး။ နိုင်ငံရေးလို့ပြောခဲ့တာမှန်တယ်။ နောက်တစ်ခါ ဒေါက်တာတို့လူငယ်အဖွဲ့တွေ မဆုံးဖြတ်နိုင်ခင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရှေ့ဆုံးကို တက်လာတယ်ဆို တာ မမှန်ပါဘူး။ လူငယ်တွေက လူအုပ်ကြီးအလယ်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဝန်းရံထားကြတာပါ။ အဲဒီအဖွဲ့ထဲမှာ ဒေါက်တာလည်း ပါချင်ပါမှာပါ။
ချုပ်ရရင်ဓနုဖြူဖြစ်စဉ်တွင် ဗိုလ်မှူးတင်ဖေအေး သည် ကျွန်တော့်အား ဂဠုန်ဦးစောလိုဖြစ်သွားမယ်ဟု ပြောခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။ ပစ်ခတ်မယ်ဆိုတဲ့ အခြေအနေမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ လူစုလူဝေးရှေ့ဆုံးကို ရောက် နေတယ်ဆိုတာ မဟုတ်မမှန်ပါဘူး။
သေသွားတဲ့သူတစ်ယောက်ကပြောခဲ့တယ် ဆိုတဲ့ ကျွန်တော်ဂဠုန်ဦးစောလို ဖြစ်သွားမယ်ဆိုတဲ့စကား ကတော့ တစ်ဆင့်ကြား Hearsay သက်သက်သာဖြစ် ပါတယ်။ Hearsay ဆိုတာ Evidence လား၊ No Evidence လားဆိုတာကို..... ဒေါက်တာစစ်တင်လို ပညာ တတ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ စဉ်းစားနိုင်မယ် ထင်ပါတယ်။အကယ်၍ .. ကျွန်တော့်ရေးသားမှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒေါက်တာစစ်တင်အနေနဲ့ ပြန်ပြီးတုံ့ပြန် ရှင်းလင်းချင် တယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်ကလည်း လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ဝမ်းသာစွာ ကြိုဆိုနေပါတယ်။
အကယ်၍ ဒေါက်တာ စစ်တင်က ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရှင်းလင်းပြောဆိုမယ် ရင်တော့ စာမျက်နှာပေါ်က ရှင်းတာထက်လူအများ သိသာမြင်သာအောင် သတင်းမီဒီယာတွေရှေ့မှာ Debate ပုံစံမျိုးလုပ်ပြီး ရှင်းလင်းရင် ပိုပြီးကောင်းလိမ့်မယ်လို့ထင်မြင်ယူဆမိကြောင်းပါ။
စစ်ဗိုလ် Captain လေး
မေး။ ။ ဒေါက်တာစစ်တင်ရဲ့ ဒုတိယဂဠုန်ဦးစောနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆောင်းပါးမှာ အချက် အလက် အချို့မှားနေတယ်လို့ ပြောတယ်နော် ။ဘယ်အချက်တွေ မှားနေတာပါလဲခင်ဗျား။
ဖြေ။ ။ ၁ ။ ။ ၄၊၄၊ ၁၉၈၉ ရက်နေ့ ဓနုဖြူမြို့မှာ အဲဒီ ဖြစ်စဉ်ဖြစ်တုန်းက ကျွန်တော့်ကို အမိန့်ပေးတဲ့ ဗိုလ်မှူး တင်ဖေအေးက ကျွန်တော့်ကိုဒုတိယ ဂဠုန်ဦးစောဖြစ် သွားမယ်ဆိုတာမျိုးလုံးဝမပြောခဲ့ပါဘူး။ ၂ ။ ။အဲဒီဖြစ်စဉ် မှာပါဝင်တဲ့ တပ်မတော်သားတွေက ဆယ်ယောက် မဟုတ်ဘူး၊ ကျွန်တော်အပါအဝင်မှ ခြောက်ယောက် တည်း၊၊ ၃။ ။ ဒူးထောက်ပြီးပစ္စတိုနဲ့ချိန်ထားတာ မဟုတ်ဘူး။ ရဲဘော်တွေကပဲ သေနတ်နဲ့ချိန်တာ (သေနတ်တွေကို ကျည်ထိုးမထားသေးဘူး) ၄။ ။ဖြစ်စဉ် ဖြစ်တုန်းမှာဒေါ်စုက ရှေ့ကတက်လာတယ်ဆိုတာ မဟုတ်ဘူး။ ဒေါ်စုကလူငယ်တွေ ဝိုင်းထားလို့ အလယ်မှာရောက်နေတာ။ ၅။ ။ ကျွန်တော့်ကို အမိန့်ပေးတဲ့ဗိုလ်မှူး တင်ဖေအေးတပ်ကထွက်ရတယ်ဆို တာမမှန်ဘူး။ သူဟာသူ အရပ်ဘက်ရောက်သွားပြီး ပင်စင်ယူသွား တာ။ ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့် ကျွန်တော်ရာထူးတိုးတယ်ဆို တာလည်း မမှန်ဘူး။
မေး။ ။ မှန်တဲ့အချက်ကရောဗျ။
ဖြေ။ ။ ပခုံးပေါ်က ဘားတွေချွတ်ပြီး မြေပေါ်လွှင့်ပစ်တယ်ဆိုတာတော့ မှန်တယ်။
မေး။ ။ ဘာကြောင့်ဒီလိုလွှင့်ပစ်တာလဲဗျ၊ဒေါ်စုကို မပစ် ရလို့လား။
ဖြေ။ ။ လုံးဝမှားတယ်။ လူအတော်များများကလည်း ခင်ဗျားမေးသလိုပဲထင်နေကြတယ်။ ဒေါ်စုကို မပစ်ရ လို့မဟုတ်ဘူး။
အဲဒီအချိန်တုန်းက ကျွန်တော့်ကို အမိန့် ပေးတဲ့သူတွေက သူတို့ပေးတဲ့အမိန့်ကို သူတို့ကိုယ်တိုင် ပဲ ပြန်ဖျက်လို့ ကျွန်တော်ကစိတ်တိုပြီး ဘားတွေဖြုတ် လွှင့်ပစ်တာပါ။
မေး။ ။ သူတို့ပေးတဲ့အမိန့်ကို သူတို့ကိုယ်တိုင်ပဲ ပြန်ဖျက်တယ်ဆိုတာက။
ဖြေ။ ။ ဒီလိုပါ၊ အဲဒီတုန်းက သူတို့ကကျွန်တော့်ကို အမိန့်ပေးထားတယ်။ ပါးစပ်နဲ့မဟုတ်ဘူး။ စာရွက်နဲ့ကို ထုတ် ပေးထားတာပါ။ စာရွက်ထဲမှာ ဘယ်လိုအနေအထား မျိုးမှာဆိုပစ်ပါလို့ အမိန့်ပေးထားတယ်။
ပစ်ရမယ့် အနေ အထားလည်းရောက်ရော၊ မပစ်နဲ့လို့ပြောပြန်တယ်။ ဒါကို မကျေနပ်လို့ ဘားတွေဖြုတ်ပြီးလွှင့်ပစ်တာ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို မပစ်ရလို့ မဟုတ်ဘူး။
မေး။ ။ အဲဒီကာလမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပေါ် ဘယ်လိုသဘောထားလဲ ၊ မုန်းတီးတာမျိုးရှိလား။
ဖြေ။ ။ မရှိဘူး၊ ဒေါ်စုအပေါ်ချစ်ခြင်း၊ မုန်းခြင်းမရှိဘူး။ သူ ဗိုလ်ချုပ်သမီးဖြစ်တယ်။ နိုင်ငံခြားမှာနေတယ်။ ဒါပဲ သိတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီအချိန်က တာဝန်ကျေတဲ့၊ အမိန့်နာခံတဲ့ စစ်သားတစ်ယောက်တော့ဖြစ်ချင်ခဲ့ တယ်။
မေး။ ။ အဲဒီအချိန်ကတားမယ့် လူမရှိခဲ့ရင်ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည်နဲ့ လူအုပ်ကြီးကို တကယ်ပစ်မှာလား။
ဖြေ။ ။ ပစ်မယ်၊ ပစ်ဖို့လည်းအမိန့်ပေးထားတယ်။ ဒါပေမယ့် စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ပစ်မှာတော့ မဟုတ်ဘူး၊ စစ်တပ်ကသင်ထားပေးတဲ့အတိုင်းပဲပစ်မယ်။
မေး။ ။ စစ်တပ်က သင်ထားပေးတယ်ဆိုတဲ့ ပုံစံက။
ဖြေ ။ ။ အဓိကရုဏ်းနှိမ်နင်းရေးပေါ့၊ ပထမစည်းသုံးခုကို တားမယ်။ စည်းသုံးခုကို မကျော်ဖို့ပြောမယ်။ မိုက်နဲ့ အော်မယ်။ စည်းသုံးစည်းကျော်လာရင်တော့ပစ်မယ်။
ပစ်မယ်ဆိုတဲ့ နေရာမှာ ပထမဆုံး လူအုပ်ကိုကျော်ပြီး မိုးပေါ်ထောင်ပစ်မယ်။ အဲဒါမှ မရရင် ရှေ့က အလံကိုင်သူ၊ ဒါမှမဟုတ် လှုံ့ဆော်သူကို ခါးအောက်ပိုင်း မသေနိုင် တဲ့နေရာကို ရွေးပစ်မယ်။
မေး။ ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ လူအုပ်နဲ့ တွေ့တဲ့ အချိန်မှာ ပစ်ဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီလား။
ဖြေ။ ။ မဖြစ်သေးဘူး၊ သေနတ်တွေ အားလုံးမှာ ကျည် တောင် မထိုးထားသေးပါဘူး။ အကယ်၍လိုအပ်လို့ ပစ်ခဲ့ရရင်တောင် Auto မပစ်ဖို့၊ တစ်ချက်ချင်းပဲပစ်ဖို့ ကျွန်တော့်ရဲဘော်တွေကိုမှာ ထားတယ်။
မေး။ ။ အခုလိုလာရှင်းတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က။
ဖြေ။ ။ ကျွန်တော့်ကို ဂဠုန်ဦးစောနဲ့ နှိုင်းတာမကြိုက်ဘူး။ နောက်ကျွန်တော့်မျိုးဆက်ကိုလည်းအရောင်မစွန်း ထင်းစေချင်ဘူး။ ဒါကြောင့်လာရှင်းတာပါ။
မေး။ ။ ဓနုဖြူဖြစ်စဉ်မှာတုန်းက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပေါ် ချစ်ခြင်း ၊ မုန်းခြင်းမရှိဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်။ အခု ကျတော့ရော။
ဖြေ။ ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှာ လေးစားအားကျ အတုယူစရာတွေအများကြီးရှိတယ်။ တချို့ ယောက်ျား ကြီးတွေထက်သာတဲ့သတ္တိသူ့မှာရှိတယ်။ တခြား အားကျစရာ၊ လေးစားစရာတွေလည်းရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် သမ္မတဖြစ်ချင်တယ်လို့ပြောတာမျိုးတော့မကြိုက်ဘူး။
မေး။ ။ ခင်ဗျားဒုတိယ ဂဠုန်ဦးစောတော့မဟုတ်ဘူး၊ ဒါပေမယ့် ဒုတိယဂဠုန်ဦးစောတွေရော ထပ်ပေါ်လာနိုင်သေးလား။
ဖြေ။ ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ချစ်ခင်ကြည်ညိုတဲ့ သူများတယ်။ သူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုကို မနာလိုတဲ့သူတွေ လည်းရှိတယ်။ ဆိုတော့ ဒုတိယဂဠုန်ဦးစောဆိုတာလည်း ပေါ်ကောင်းပေါ်လာနိုင်တယ်။
ကလောင်အမည် - စစ်ဗိုလ် Captain လေး
အမည်အရင်း - ဗိုလ်ကြီးမြင့်ဦး
(ဒု/ညွှန်ကြားရေးမှူး (ငြိမ်း) လယ်/ဆည်ဝန်ကြီးဌာန)
မွေးသက္ကရာဇ် - ၁၅.၆.၆၁
မွေးရပ် - တိုက်ကြီးမြို့၊
ပညာအရည်အချင်း - BA (Myanmar)
ထမ်းဆောင်ခဲ့သည့်ကာလ - ၁၉၈ဝ မှ ၁၉၉၂
လိပ်စာ - မြောက်ဥက္ကလာ၊ ရွှေပေါက်ကံမြို့သစ်
BY YeYint Nge ... 7/25/20210comment
BY YeYint Nge ... 7/05/20210comment